अर्थ सचिव मरासिनीद्वारा अख्तियारलाई चुनौती एफपिओको कर उठाऊ भने अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई को हुन् ? - Aathikbazarnews.com अर्थ सचिव मरासिनीद्वारा अख्तियारलाई चुनौती एफपिओको कर उठाऊ भने अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई को हुन् ? -
अर्थ सचिव मरासिनीद्वारा अख्तियारलाई चुनौती एफपिओको कर उठाऊ भने अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई को हुन् ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक देखि शिखर इन्स्योरेन्स लगायत दर्जनौ बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले एफपिओ (शेयर) खरिदमा छली गरेको कर उठाउन अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भेटिएको छ । तर अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले कर उठाउ भन्ने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई को हो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ के हो अर्थमन्त्रीज्यू ? हेक्का होस् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक देखि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत १ दर्जन बैंक र वित्तिय संस्थाले करिब ८ अर्ब कर छली गरेको भेटिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी संस्थाहरुले छली गरेको कर उठाउन अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि अर्थसचिव मरासिनीले अटेर गरेको फेला परेको छ । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका अर्बै रकमको कर उठाउने दायित्व अर्थमन्त्रालयको हो कि होइन ? जनताको करबाट चर्को तलब भत्ता लिने अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले राज्यले उठाउनु पर्ने कर उठाऊ भने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई को हुन भन्नुले के अर्थ राख्दछ हेक्का होस् । कर उठाउने दायित्व अर्थसचिव मरासिनीको हो कि होइन । यसको खोजी हामीले शुरु गरेका छौं ।
अर्थसचिवज्यू एफपिओमा लाग्ने कर छली गरेकै कारण हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर साधारण सभाबाटै फेल भएको हो । त्यसकारण राज्यको कर तपाईको सम्पत्ती होइन, राज्यको हो । कर उठाउने दायित्व तपाईको हो हेक्का होस् । अर्थसचिवज्यू तपाईलाई कर उठाउने अधिकार छ तर कर छली गर्नेलाई छुट दिने अधिकार छैन । के नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको यत्रो कर छलीलाई तपाईले साथ दिनु भएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो हेक्का होस् । यस बारेमा हामीले अनुसन्धान जारी राखेका छौं । पद ठूलो कुरो होइन, काम ठुलो कुरा हो । अर्थसचिव मरासिनीज्यू भोलि जो पनि आउन सक्दछ । हेक्का होस् ।
वैशाख १८ गते को बन्दैछ नेपाल प्रहरीको आईजिपीः पोखरेल, थापा, सिंह कि धानुक ?
कोरानाबाट जोगिने स्वास्थ्य सामाग्री किन्दा मेगा बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट
काठमाण्डौ युथ कनक्लेभको इन्टरनेट पार्टनर डिशहोम फाईबरनेट
लघुवित्त उद्योग सरकारको महत्वमा परेको देखिएन